Health Knowledge – nutri-knack
ထက်မြက်တဲ့ကလေးဖြစ်စေချင်ရင် သူတို့လေးတွေကိုပြောခွင့်ပေးပါ 11
လမစေ့ဘဲမွေးဖွားလာသော ကလေးများကို ပြုစုစောက်ရှောက်ခြင်း 14
မူကြိုအရွယ်ကလေးတွေ ကျန်းမာစေဖို့အတွက် အစားအစာလမ်းညွန်ချက်များ 14
ကိုယ့်ရဲ့ကလေးကို ဘာတွေကျွေးသင့်သလဲ၊ ဘယ်လောက်ကျွေးသင့်သလဲဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်စနှောင့်စနင်းဖြစ်နေတဲ့ မေမေတို့အတွက် မူကြိုအရွယ်ကလေးတွေကို ကျွေးသင့်တဲ့ အစားအစာလမ်းညွှန်လေးကို ဖတ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
ကလေးက ကြီးထွားလာတာနဲ့အမ ျှ သူ့ရဲ့နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုတွေသာမက အစားအစာစားတဲ့ပုံစံတွေပါ ပြောင်းလဲလာတာကို တွေ့ရပါမယ်။
ကြီးထွားမှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမယ့်၊ နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုတွေများလာတဲ့အခါမှာ စွမ်းအင်တွေရရှိစေဖို့အတွက် သင့်တော်တဲ့ အာဟာရကို
>> မူကြိုအရွယ်ကလေးငယ်ကို ဘာတွေကျွေးသင့်သလဲ?
ကလေးက အစားအစာမျိုးစုံကိုစားနိုင်တဲ့အရွယ်ရောက်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ကလေးကြိုက်စေဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီအရွယ်ကလေးတွေက အရသာ၊ အရောင်နဲ့ အထိအတွေ့အမျိုးမျိုးကို ခံစားတတ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ကလေးကြိုက်စေမယ့် အစားအစာမျိုးစုံကို သေချာလုပ်ပြီးကျွေးပါ။
>> မူကြိုအရွယ်မှာ ဘယ်လောက်များများကျွေးဖို့လိုသလဲ?
ကလေးစားနိုင်သလောက် စားပါစေ။ ဘယ်လိုအာဟာရပြည့်ဝတဲ့အစားအစာတွေကျွေးရမလဲဆိုတာကိုသာစဉ်းစားပါ။ တစ်နေ့နဲ့ တစ်နေ့၊ အစားအစာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပေါ်မှာ ကလေးရဲ့အစားစာချင်စိတ်က မတူ
နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကလေးပန်းကန်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့အစားအစာအားလုံးကိုကုန်အောင်စားဖို့ တွန်းအားမပေးပါနဲ့။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းက
အစားအစာတွေကို အုပ်စု(၅) စုခွဲခြားထားပါတယ်။ ကလေးကို ဒီအုပ်စု (၅) မျိုးစလုံးကနေ တစ်မျိုးစီပါဝင်အောင်ကျွေးပါ။
အနည်းဆုံးအစေ့အဆန် ၆ မျိုးလောက်ကျွေးသင့်ပါတယ်။
ဥပမာ- ပေါင်မုန့် တစ်ချပ်၊ ခရက်ကာ ၄-၅ ချပ်၊ ထမင်း/ပါစတာ နို့ဆီဘူးတစ်ဝက်၊ ချာပါတီ ၂ ခု ကျွေးပါ။
2. သစ်သီးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်အုပ်စု
တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး ၅ ခွက် - ဥပမာ သစ်သီး (သို့) ဟင်းသီးဟင်းရွက်သေးသေး တစ်ဝက်-တစ်လုံး၊ ဖျော်ရည် (သို့) စွပ်ပြုတ် ခွက်တစ်ဝက်၊ အရွက်စိမ်း (သို့) အရွက်ပြုတ်သုပ် ခွက်တစ်ဝက် ကျွေးသင့်ပါတယ်။
3. နို့နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းများ
တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး ၃ ခု( နို့နဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်း ၂- ၂ ခွက်ခွဲလောက်တိုက်သင့်ပါတယ်။) နို့၊ ဒိန်ချဉ်၊ ဒိန်ခဲစတာတွေကျွေးနိုင်ပါတယ်။ ကလေးကိုလုံလောက်စွာကျွေးပါ ဒါပေမယ့် အလွန်အကျွံမဖြစ်ပါစေနဲ့။
တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး ကြက်ဥ တစ်လုံး၊ ပဲအမျိုးမျိုး ခွက်တစ်ဝက်၊ အဆီမပါတဲ့အသား (ကြက်သား၊ ငါး) စားပွဲတင်ဇွန်း ၁-၃ ဇွန်းကျွေးသင့်ပါတယ်။
တစ်နေ့ကို ထောပတ် (သို့) အဆီ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်းပါဝင်ေ
>> မူကြိုအရွယ်ကလေးတွေကို ဘာတွေမကျွေးသင့်ဘူးလဲ
ကလေးက အစားအစာအချို့နဲ့ဓာတ်မတည့်ဘူးဆိုရင် ဒီအစားအစာတွေမကျွေးပါနဲ့။ ဓာတ်မတည့်မှုအဖြစ်များတဲ့ အစားအစာတွေကတော့ နို့၊ ဥ၊ အကြေးခွံပါသောငါးများ၊ ဂျုံ၊ အခွံမာသီးများ စသည်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ သေချာစေဖို့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ အစာနင်စေတဲ့ ချောပြီး စေးကပ်တဲ့အစားအစာတွေ ဥပမာ- အသားတုန်းကြီးကြီး၊ သကြားလုံး၊ စပျစ်သီးတစ်လုံးလုံး၊ မြေပဲထောပတ် စတာတွေမကျွေးပါနဲ့။ ဒါ့အပြင် အစေ့အဆန်များ၊ မုန်လာဥအစိမ်း၊ စပျစ်သီးခြောက်စတာတွေကိုလည်း သတိထားပြီးကျွေးပါ။ အစာမနင်စေဖို့အတွက် အမြဲအတုံးသေးသေးလေးတွေ တုံးကျွေးပါ။
>> ဘာသွားရည်စာတွေ ကျွေးမလဲ
• အစေ့အဆန်အုပ်စု - ခရက်ကာ၊ ကောက်ပဲသီးနှံခြောက်၊ ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်၊ ပေါင်မုန့်ကင်
• ဟင်းသီးဟင်းရွက်အုပ်စု - သခွားသီး၊ မုန်လာဥ အစိမ်းများ (အတုံးသေးလေးတွေတုံးပြီးကျွေးပါ။)
• သစ်သီးများ - ငှက်ပျောသီး၊ ပန်းသီး၊ သစ်တော်သီးကဲ့သို့သော လတ်ဆတ်သောသစ်သီးများနှင့် သစ်သီးခြောက်များ
• နို့နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းများ - ဒိန်ခဲ၊ ဒိန်ချဉ်
• အသားဓာတ်အုပ်စု - ထောပတ်၊ အခွံမာသီးနှင့် အစေ့အဆန်များ၊ ကြက်ဥ မကျက်တကျက်ပြုတ်၊ ကြက်ဆင်၊ ကြက်၊ တူနာအသုပ်များ။
မျက်စိစမ်းသပ်ဖို့ လိုနေတဲ့ သားသားမီးမီးတွေ 4